Wasiirkii hore ee Gaashandhiga oo noqday Guddoomiyaha Golaha shacabka – Kalfadhi
Doorasho ay ku baratameen ku dhawaad 10-musharax oo u tartamaysay xilka Gudoomiyaha Golaha shacabka oo horey uu iskaga casilay Gudoomiyihii hore ee Golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa maanta si nabad ah uga dhacday magaalada Muqdisho.
Musharax xildhibaan Wasiirkii hore ee Gaashandhiga Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa ugu dambeen ku guulaystay doorashadii maanta ka dhacday aqalka Golaha shacabka.
Wareega Labaad ee doorashada, Waxaa isugu soo horay Musharixiinta kala ah Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Ibraahim Isaaq Yaroow, Labadanba waxey xubno ka ahaayeen Xukuumada Ra’iisul Wasaare Xasan Kheyre balse xilalkoodii waa ay isaga soo tageen.
Gudoomiye kuxigeenka 1aad ee Golaha shacabka Cabdiwali Sheekh Ibrahim Muudey ayaa ugu dambeen ku dhawaaqay natiijada.
Waxa uu Muudeey Sheegay in Doorashada Gudoomiyaha Golaha Shacabka uu ku Guuleystay Xildhibaan Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan oo keensaday 147 cod , Halka Ibraahim Isaaq Yaroowna uu Keensaday 118 cod.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Farmaajo ayaa ugu hambeelyay Mursan guusha uu maanta ka gaaray doorashada waxana uu u mahadceliyay musharixiinta kale oo Mursal la tartamay.